Soosaarayaasha Waaqeeyaha Birta ah - Shiinaha Bixiyeyaasha Taranka iyo Warshadaha Shiinaha
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU369S118000AG Cabbirka KALKA KOOXE Erayada muhiimka ah ee loo yaqaan 'chef wain apron,' apron oo leh jeebadaha Wejiga 70/30 poly / suuf GSM.265g tolida Xargaha Polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaanaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkaysata, u adkaysashada caaryada, iyo ...
Alwaax gaaban oo dheelitir ah oo cajiin ah oo leh alwaaxyo U301S0500A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U301S0500A Cabbirka KALKA KOOBAHA Erayada muhiimka ah ee loo yaqaan 'chef apron, apron, apron', waardiyaha dhexda, dhexda wajiga (dharka) 65/35 poly / cudbi GSM.235g Dharka tolida pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa thread xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi t ...
Dharka cad ee dharka cas ee dharka cas ee dharka casaanka ah
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U301S0400A Cabbirka KOOBKA Erayada furaha kalfadhiga gaagaaban, gaagaaban, biro-waardiye, dhejis dhejis ah 65/35 poly / cudbi GSM.235g Dharka tolida Pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sare. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi t ...
Dharka cad ee dharka cad ee 'Poly Cotton' Wareeg gaaban oo ay ku jiraan jeebado U301S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U301S0200A Cabbirka KOOBAHA Erayada furaha ah, gabaw gaagaaban, biiriye, waardiyaha dhegaha, 65/35 poly / suuf GSM.235g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa taxane xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi t ...
Dharka cad ee dharka cad ee 'poly poly' oo ah jeebabka U301S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U301S0100A Cabbirka KOOBKA Erayada furaha kalfadhiga gaagaaban, gaagaaban, biro, waayir madow, 65/35 poly / suuf GSM.235g Dharka tolida Pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi t ...
Canvas Waist Chef Apron oo wata jeebabka CU378S135022U4
Nooca CUDURKA CODEYNTA CU378S135022U4 Cabbirka KALKA KOOXAHA Erayada muhiimka ah ee maqashiinka sugida, dhexda, marooyinka gaagaaban ee shiraaca ah 45/55 poly / suuf GSM.300g Dharka tolida Pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi u ...
Midabka qaxwaha Canvas Waist Chef Apron oo wata jeebabka CU378S134022U4
Nooca CUDURKA CODEYNTA CU378S134022U4 Cabbirka KALKA KOOXDA Erayada furaha ee loo yaqaan 'cheer suger apron', dhexda dhexda, maacuun gaagaaban oo shiraac ah 45/55 poly / suuf GSM.300g tolida tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi u ...
Midabada Grey Midabka Xashiishka Jiilaalka ee Caano Wejiga ah oo leh Boorsooyin CU378S133022U4
Nooca CUDURKA CODEYNTA CU378S0133022U4 Cabbirka KALKA KOOWAAD Erayada furaha makhaayad sugida, dhexda, xashiish gaagaaban oo shiraac ah 45/55 poly / suuf GSM.300g tolida siligga polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi t ...